एमालेले टुंगो लगायो मन्त्रीको नाम, अर्थमा ईश्वर, परराष्ट्रमा प्रदिप र संघीयमा लालबाबु ! हेर्नुहोस् पूरा विवरण : – Setosurya
काठमाडौं : सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्‌मा सहभागी हुने नेताको नाम टुंगो लागेको छ। शपथ ग्रहणसम्म कुनै फेरबदल नभए एमालेबाट सरकारमा सहभागी हुनेको नाम टुंगो लागेको छ।
एमाले स्थायी कमिटीबाट मन्त्री छान्ने जिम्मेवारी पाएका प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमा सहभागी हुने नेताको नाम टुंगो लगाएका हुन्। उनले अन्य नेताहरूसँगको परामर्शमा यी नामको टुंगो लगाएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो। सरकारमा सहभागी हुने केही नेताको जिम्मेवारीसमेत टुंगो लागेको स्रोतको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार एमालेकातर्फबाट महासचिव ईश्वर पोखरेलले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नेछन्। सचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने एमालेका एक नेता बताए। तर, अन्य मन्त्रीका सन्दर्भमा भने मन्त्रालय कुनकुन हुने भन्ने टुंगो नलागेको उनको भनाइ छ।
नेता भानुभक्त ढकाल शिक्षा तथा जनसंख्यामन्त्री बन्ने बताइएको छ। एमाले सचिव योगेश भट्टराईको नाम सरकारमा सहभागी हुनेको सूचीमा रहेको र उनी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुने सम्भावना रहेको ती नेताले बताए।
यस्तै, नेताहरू नारदमुनि राना, प्रेम आले, पार्वत गुरुङ, रघुवीर महासेठ, पद्‍मा अर्याल मन्त्री बन्ने लगभग टुंगो लागेको छ। प्रधानमन्त्रीसँगै जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री बनेका लालबाबु पण्डितलाई स्थानीय विकास मन्त्रालय दिने गृहकार्य भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।
शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मन्त्री छान्ने जिम्मा दिएको थियो।
शपथ ग्रहण सोमबार
नयाँ संविधानअनुसार भएको संघीय संसदको निर्वाचनबाट मुलुकले प्रधानमन्त्री पाएको २ साता बढी भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। निकट भविष्यमै पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेका नेकपा एमालेले १० र माओवादी केन्द्रले ७ वटा मन्त्रालय लिने भागबण्डा गरेका छन्। तर, यी दुवै पार्टीले मन्त्रीको टुंगो लगाउन नसक्दा हालसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो।
यद्यपि, सरकारले मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहणको समय भने सोमबारका लागि तोकेको छ। सोमबार दिउँसो ३ बजे मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहणको समय तोकेको प्रधानमन्त्री ओलीका सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए।
आज मन्त्री परिषद् बिस्तार हुँदै ! यी हुन प्रधानमन्त्री ओलीका सारथीहरु !
‘स्थानीय चुनावको घोषणा कुनै पनि बेला हुन सक्छ’ प्रधानमन्त्रीले भोलि कांग्रेससँग छलफल गर्ने
चुनाब सार्नु योजनाबद्ध खेल होः पोखरेल ‘सरकारको निर्णयले गम्भीर र दूरगामी प्रभाव पार्नेछ’
को-को जाँदै छन् एमालेबाट राष्ट्रियसभामा? यी हुन् सिफारिसमा परेका
स्थानीय तहको निर्वाचनको आधारमा कुन दल कति बलियो ? बाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको मत सहित
काठमाडौंका १० वटै क्षेत्रमा एमालेले छान्यो उम्मेद्वार : को-को परे सिफारिसमा ?
जिल्ला समन्वय समिति पर्वतमा कमिशनको खेलः जनप्रतिनिधी आएपछि कमिशन नआउने डरले हतारमा गाडी खरिद
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई माओवादीले लियो यस्तो बदला, सल्लाह नै नगरी भयो यति ठूलो निर्णय
नेपाली फौज संसारकै ९७ औं शक्तिशाली, अन्यको स्थान कहाँ ?
फुर्सद छैन धुर्मुस–सुन्तलीलाई
मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डमा पहिरो, बस र जीप त्रिशुलीमा खसे…….
नेपाल प्रहरीका ४८ एसपीको सरुवा (सूचीसहित)
माघ सात गतेभित्र संसद बैठक नबसे संविधान धरापमा ! कतै संविधाननै उल्टाउने खेल त हैन ?